Essay Akademia ao amin'ny ||
Mila fanampiana amin'ny fanoratana matihanina? Makà taratasy avo lenta avy amin'ny Essay Akademika tsara indrindra amin'ny || voasoratra amin'ny fenitra akademika rehetra.
Ahoana ny fomba hiatrehana ireo olan'ny fanoratana lahatsoratra ho an'ny akademika?
Inona no tokony ho fantatro momba ny serivisy fanoratana lahatsoratra akademika alohan'ny hikarakarako iray? Mazava ho azy fa tsy mila milaza ianao fa tsy maintsy mangataka referansa. Rehefa dinihina tokoa, ny serivisy izay horaisinao dia ireo mpampiasa anao amin'ny ho avy. Noho izany, tokony ho afaka hanome topy maso tsara anao amin'ny fomba nanoloran'ny mpanoratra ny asa nampanaovina azy taloha izy ireo. Tsy maintsy manamarika ireo rehetra ireo ianao mba hanakaramana ny mpanoratra tsara indrindra.
Indray mandeha, tonga ny filaharana ho an'ny asa fanoratana akademika, bibliography, thesis, sns. Raha manana fangatahana ianao dia hamangy azy ary hangataka fanazavana momba ny zavatra rehetra. Aorian'ny famaritana vao afaka manapa-kevitra amin'ny fomba fanoratra izay mifanaraka aminao indrindra. Misy karazana fanoratana akademika isan-karazany ary ny sasany dia tsara lavitra noho ny sasany. Ohatra, ny mpanoratra sasany dia mahay mametraka hevitra haingana dia haingana raha ny sasany kosa mety mila fotoana kely kokoa vao afaka mamoaka izany.
Inona no antenainao amin'ireo mpanoratra toy izany? Tokony ho azon'izy ireo omena anao amin'ny antsipiriany ny dingana raisiny mba hanomanana ny anjaranao handefasana ary rehefa vita ny asa dia tokony hifanaraka tsara amin'ny fenitrao io. Ny halavan'ny fampianarana dia mety samy hafa amin'ny mpanome tolotra iray hafa. Ny sasany hanome anao ny isa farafahakeliny pejy, raha ny hafa kosa mety hanaiky hihoatra an'io.
Ny habetsaky ny fotoana izay hatokana ho an'ny angon-drakitrao manokana dia samy hafa ihany koa amin'ny mpanome tolotra iray hafa. Ny orinasa sasany dia manome sanganasa pejy roa na telo, fa ny sasany kosa ho vonona amin'ny pejy dimy na enina. Raha ny momba ny angon-drakitra manokana dia tokony ahitana ny angon-drakitra manokana rehetra ny kaomandy rehetra tonga ao. Anisan'izany ny anarana, adiresy fifandraisana, mari-pahaizana akademika, adiresy, adiresy mailaka sns. Ny mpanome tolotra fanoratana lahatsoratra dia tsy tokony manandrana manafina angon-drakitra manan-danja ary raha misy izany dia tokony hampahafantarina ny mpanjifa izany.
Mba hanatsarana ny sanganasa fianaranao dia tsara ny mamaky zavatra betsaka. Aza mamaky boky fotsiny fa manao gazety koa raha te hahalala bebe kokoa momba an'io lohahevitra io. Ny hevitra dia ny hahafantatra ny lohahevitra mba hahafahanao manoratra momba ny lohahevitra sy ireo olana rehetra tokony horesahina rehefa manoratra ny lahatsoratra nataonao ianao. Ny ankamaroan'ny mpanoratra dia hanao izay fara heriny mba hanalavirana ny hevitry ny tena manokana amin'ny sanganasa fianarany. Na izany aza, tsy midika izany fa tsy afaka maneho ny heviny manokana ao amin'ny taratasiny izy ireo.
Ny sanganasa rehetra dia mitaky antsipirihany manohana sy angona mba hanohanana ny tohan-kevitra izay voasoratra. Ny mpanoratra iray dia afaka manampy amin'ny fanomezana antsika ireo andinindininy ireo amin'ny endrika famoahana lahatsoratra. Mba hanaovana izany dia tokony ampidiriny miaraka amin'ny anaran'ny komity nanara-maso ny tetikasa ny anaran'ny mpanohana ny tetikasa. Izany dia satria ny mpikarakara serivisy fanoratana akademika dia tsy maintsy manome antsika ny fampahalalana mba hanohanana ireo tohan-kevitra izay hasehony amin'ny taratasy. Arakaraka ny an-tsipiriany sy anohanany an'ity fampahalalana ity no vokatra tsara kokoa azony omena antsika.
Tokony ho fantatsika ihany koa fa ny mpanoratra akademika amin'ny Internet dia manitsy ny sangan'izy ireo alohan'ny handefasana izany amin'ny trano famoahana. Noho io antony io no ilantsika antoka fa manamarina ny lesoka isika alohan'ny handefasana ny baiko. Raha vantany vao voamarina ny asa ary namboarina ny lesoka, dia afaka mandefa ny baiko avy eo izahay. Misy serivisy fanamarinana marobe manamarina izay manatanteraka ny doka manontolo amin'ny famoahana ireo taratasy akademika. Mila mitady iray izay manana traikefa ampy fotsiny isika mba hahatonga ny asantsika ho tonga lafatra.
Ny zava-misy dia mpianatra maro no manoratra samirery ny asa sorany na ny dissertation-ny. Midika izany fa tokony hitandrina tsara izy ireo amin'ny zavatra izay ampidirin'izy ireo ao anaty antontan-taratasy. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hialana amin'ny fahadisoana dia ny fampiasantsika ny serivisy amin'ny serivisy fanovana. Na izany aza, ilaina ihany koa ny fitadiavantsika mpanoratra izay afaka mahafeno ny fe-potoana farany azontsika omena sy manome valiny tsara antsika. Rehefa dinihina tokoa, ny tanjona dia ny hahazoana antoka fa ho afaka hahazo ny naoty tsara indrindra isika rehefa mandefa ny fanendrena anay.